रोचक Archives - Page 22 of 26 - Recent Nepal News
एक दम्पत्ति जसले खर्चिए कुकुरको उपचारमा डेढ करोड
काठमाडौं, पुस २१—मान्छेले घरपालुवा जनावरलाई कतिसम्म माया गर्छन् भन्ने उदाहरण एक अमेरिकी दम्पत्तिले देखाएका छन् । उनीहरुले घरमा पालेको कुकुरको उपचारका लागि एक लाख ५५ हजार डलर (डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढि) खर्चिए । अमेरिकाको विलियम्सवर्गमा बस्ने दम्पत्ति केट र बेन स्टर्नले सन् २०१३ मा जाने नामको एउटा फ्रेन्च कुकुर घरमा ल्याएका थिए । ल्याएको ६ महिनापछि कुकुर बिरामी पर्‍यो । शुरुमा लगातार वान्ता गर्न...
पत्यार लागेन? पढ्नुहोस् विधि, एउटा आलुले ४० दिनसम्म बत्ती बाल्न सकिने
एजेन्सी – बत्ती बाल्नका लागि बिजुली नभएमा आलु लाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको कुरा सुन्दा तपाईं लाई पक्कै पनि अच्चम्म लाग्न सक्छ । तर यो कुरा सत्य साबित भएको छ । जेरुशेलमको हिब्रु युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले आलुबाट बत्ती बाल्न सकिने र यसले विश्वका गरिब गाउँ बस्तिलाई पनि उज्यालो बनाउन सकिने जनाएका छन् । अनुसन्धानकर्ता मध्येका एक इजरायलको हिब्रु विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता रोबिनोविचका अनुस...
चारवर्ष सम्मपनि आफ्ना सन्तान मार्ने बस भूल्न नसक्ने गाईको दर्दनाक कथा (भिडियो)
एजेन्सी – यस स‌ंसारमा आमा र बच्चाको सम्बन्ध सबैभन्दा प्यारो हुन्छ । मानिसको संसारमा हाम्रो आसपासमा यस्तो सम्बन्धलाई हामी दैनिक जसो देखिरहेका हुन्छौँ । तर जनावरमा पनि त्यो माया कमी छैन् । त्यसको एक प्माण भएको छ भारतको दक्षिण सहर कर्नाटकको उत्तरमा अवस्था एक जिल्लामा चारवर्ष अघि भएको घटना । सुन्दै पिडादायी एउटा घटना गाईले अझै झुल्न सकेको छैन् । कर्नाटकको सिरसीमा चार वर्ष पहिले एक सडकमा एउटा बसले ड...
एउटा अनौठो बिहे जहाँ बेहुलाले गाउन लगाए , बेहुलीले कोट पाइन्ट लगाइन्
काठमाडौं—हामीकहाँ बिहेमा बेहुलीले सारी चोलो वा ब्लाउज लगाउँछन् भने बेहुलाले कोट पाइन्ट वा दौरा सुरुवाल । बिहेमा गाउन पनि लगाउँछन् बेहुलीहरु । तर चीनमा एउटा यस्ता बिहे भयो जहाँ बेहुलाले बेहुलीले लगाउने गाउन लगाए भने बेहुलीले कोट पाइन्ट लगाइन् । बेहुला बेहुलीको त्यो साटफेर गरिएको पहिरनले सबै पाहुनालाई अचम्ममा पार्‍यो । आखिर किन त्यसरी साटफेर गरी विवाहका परिहन बेहुला बेहुलीले लगाए भन्नेमा आगन्तु...
नियम कडा ! अब स्कर्ट लगाउन बाबुको अनुमति चाहिने
एजेन्सी - छोटो पहिरन लगाउनु व्यक्तिको इच्छाको कुरा हो । तर, बेल्जियममा कुनै महिलाले चाहेर मात्रै छोटो पहिरन लगाउन पाउँदिनन् । यसका लागि उनले बाबुबाट लिखित अनुमति लिनुपर्छ । सन् १८८९ को डिसेम्बरमा एउटा कानुन बनेको थियो, जसमा घुँडाभन्दा चार इन्च माथिसम्म आउने पहिरन लगाउनुअघि कुनै पनि युवतीले बाबुको लिखित अनुमति लिनुपथ्र्यो । सन् २००० मा आएर सो कानुन संशोधन भयो । ‘तर पनि महिलाहरूको भलाइका लागि भन...
तरकारी किन्दा सावधान !
एजेन्सी - के तपाईंलाई काउली मनपर्छ ? यदी मनपर्छ भने काउली किन्दा सावधान हुनुहोस् । किनकी पछिल्लो समय सामाजिक सन्जालमा एउटा फोटो निकै भाइरल भइरहेको छ जुन फोटो हेर्दा हरेक मानिसको आङ सिरिङ्ग हुन्छ । भारतीय संचार माध्यममा भाइरल भइरहेको उक्त फोटोमा काउलीभित्र सर्प देखिन्छ ।
लोखर्केले नेताको टाउको फुटार्इदिएपछि…
एजेन्सी - लोखर्के बिरुद्ध भाषण गरेका एक अमेरिकी नेताको टाउको लोखर्केले फुटाइदिएको छ । अमेरिकाको शिकागोका एक राजनीतिज्ञको नोभेम्वर १३ मा लोखर्केले खप्पर फुटाइदिएको र उनले त्यसअघि लोखर्के बिरुद्ध भाषण गरेको बताइएको छ । हफिंटन पोष्टले उल्लेख गरे अनुसार राजनीतिज्ञ होवार्ड ब्रुकिन्स जुनिएरले लोखर्केले आफुमाथि बदलास्वरुप आक्रमण गरेको दाबी समेत गरेका छन् । उनले अक्टोबरमा सहरमा नगर प्रशासनले बाँडेका फोहो...
मानिसको भाग्यबृद्धि हुन्छ भन्दै बाँदरका लागि ‘शाही भोज’ (फोटो फिचर)
बैंकक- थाइल्याण्डमा बाँदरलाई शाही भोज आयोजना गरिएको छ । बाँदरलाई मिठा परिकार खुवाउनाले मानिसको भाग्यबृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थानीयमा रहेको उक्त भोज आयोजना गरिएको समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । भोजमा विभिन्न फलफुल, परिकार तथा पेय पदार्थको व्यवस्था थियो । उत्तरी बैंकको लोपबुरी प्रान्तमा आयोजना गरिदैं आएको भोज विश्वमा चर्चित छ । उक्त भोज हेर्नका लागि विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक आउने गर्दछन् । भोजमा...
सडकमा भेट्टाएको २० डलरले बनायो करोडपति
काठमाडौं— कसैको भाग्य चम्किनुछ भने ठूलो परिश्रम केही गर्नुपर्दो रहेनछ, मात्र काकताली पर्नुपर्ने रहेछ । अमेरिकामा एकजना युवकको भाग्य एकाएक यसैगरी चम्किएको छ । सडकमा भेटिएको २० डलरको नोटले उनलाई एकाएक करोडपति बनाइदिएको छ । सनफ्रान्सिस्कोमा बस्ने ह्युबर्ट ट्यांग नामका युवक इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा उभिएका थिए । तब उनको नजर सडक किनारामा कसैले खसालेर छाडेको २० डलरको एउटा नोटमा पर्यो । उनले तुरुन्तै त्यो...
तपाईलाई थाहा छ ? किन राती सुत्दा कहिल्लै भान्सा कोठामा जुठो भाडा राख्नु हुँदैन ?
किन राती सुत्दा कहिल्लै भान्सा कोठामा जुठो भाडा राख्नु हुँदैन ? ज्योतिषशास्त्र र वास्तुशास्त्रसंग जोडिएका कैयौँ यस्ता साना कुराहरुबारे जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । १ राति सुत्नु अघि जहिले पनि घरको भान्सा कोठा र बाथरुममा एक बाल्टिन पानी भरेर राख्ने गर्नुहोस । भान्सा कोठामा पानी भरेर राख्दा ऋणबाट मुक्ति मिल्दछ भने बाथरुममा पानी भरेर राख्दा जीवनमा उन्नतिको बाटोहरु खुल्दछन् । २. घरको मुख्य ढोका अगा...